Kooxaha Barcelona iyo Real Madrid oo farriin ku aaddan sanadka cusub ee 2021-ka isugu jawaabtay barta Twitter-ka – Gool FM
(Madrid) 02 Jan 2021. Haa waa laga yaabaa inay xafiiltamaan, laakiin Kooxaha Real Madrid iyo Barcelona waxay ku mideysan yihiin rabitaankooda ah in taageerayaasha ay markale ku soo laabtaan tarabuunka muddo kaddib.
Waxay ku wadaageen isweydaarsi baraha bulshada sida ay u soo dhoweeyeen sanadka 2021-ka, iyadoo ay markii ugu horeysay Barcelona qoraal ay soo dhigtay ay Real Madrid ka jawaabtay kaasoo ay ku macsalaameyneyso 2020, isla markaana ay ku soo dhoweynayso sanadka 2021.
Barcelona ayaa qoraal ay soo dhigtay Twitter-ka waxa uu u dhignaa: “Rabitaankeena ugu weyn ee 2021 waa in taageerayaasha ay dib ugu soo laabtaan dareenka kubada cagta inay aad u dhowdahay.”
Kooxda Real Madrid ayaa markaas ku jawaabtay.
“Sanad wanaagsan dhammaan!” ayay jawaabtoodii ku bilaabatay.
“El Clasico xitaa waa ka badan yahay Clasico iyadoo taageerayaasheenna ay fadhiyaan tarabuunka, waxaan rajeyneynaa inay noqon doonto sida ugu dhaqsiyaha badan uguna macquulsan. “
Kabtanka Real Madrid ee Sergio Ramos oo seegi doona kulanka ugu horreeya Kooxdiisa ee sanadka 2021-ka... (Muxuu ku maqnaan doonaa Ramos kulanka caawa?)